September 2015 – Ministry of Education in Puntland
Wasaaradda waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland oo xalisay khilaaf ka taagnaa dugsiga waxbarashada Sunajiif
28/09/2015- Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dowladda Puntland ayaa soo afjartay khilaaf ka taagnaa dugsiga hoose/dhexe ee tuulada Sunajiif ee hoostaga Garowe, kaasoo saamayn ku yeeshay howlaha waxbarashada ee deegaanka. […]
September 19, 2015 / News
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo Tababar ku saabsan kormeerka Waxbarasho u soo xirtay shaqalaheeda Waxbarashadda.
19/09/2015-Waasarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa Qabtay tababar ku saabasan Tayeynta Waxbarashada, Tababarka oo Lagu Tabarayey shaqalaha Wasaarada dhaxe iyo kuwa Gobolada. Tababarka ayaa waxaa soo qaban […]
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare Puntland oo kormeeray Goobaha waxbarasho Galkacyo
16/09/2015-Kormeerkan ayaa waxaa wasiirka ku wehliyay Maamulka Gobolka Mudug Gudoomiyaha waxbarashada Gobolka Bashiir Axmad khalaf iyo masuuliyiin kale waxuuna booqday qeybo kamida Schoolada Gaalkacyo . Wasiirka Wax-barashada Dowlada Puntland Pro […]
September 9, 2015 / News
Wasaaradda Waxbarashadda iyo Tacliinta sare oo xustay maalinta caalamiga ah ee wax Akhriska aduunka
08/sep/2015-Munaasabad lagu xusayay maalinta wax-akhrista aduunka oo ku beegan sanad kasta 8 September ayaa maanta oo tallaado ah markii ugu horeysay lagu qabtay Puntland gaar ahaan Garowe. Xuska maalinta wax-akhriska […]
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlada Puntland oo shir wayn laqaaten Maamulada Iskuuladda Gaarisa,Biyaha Kulule iyo Bandarqaasim
Dugsiga sare ee Xamadaan boosaso oo Maalintii labaad xil Wareejintiso socoto.